Anyị na-eji GotoMeinging ihe dị ka ụbọchị ọ bụla na-arụ ọrụ iji gwa ndị ahịa anyị okwu. Ọ dị mma ịhụ otu n'ime ndị ahịa anyị na ndị nkwado ha, Mindjet, na vidio GotoMeeting! Vidio ahụ na-ekwu maka itinye aka na ya. Ma ị na-arụpụta uche ma ọ bụ na-enyocha atụmatụ atụmatụ plan visibiliti bụ isi. Maapụ ọgụgụ isi na-ahụ echiche, usoro na njikọ iji mee ka ọ dị mfe nghọta. N'ezie, Gotomeeting na-eme otu ihe ahụ na ikike ugbu a
Mgbe mụ na ndị ahịa rụkọrọ ọrụ n’oge gara aga na mkpọsa ozi emere na mbido, isi ihe ga-aga nke ọma bụ ọtụtụ ozi dị mkpa ewetara ọtụtụ oge. Aga m adọ ndị mgbasa ozi aka na ntị gbasara izipu ozi na-ezipụ otu oge ma na-atụ anya nsonaazụ dị ukwuu. Ugboro ugboro, anyị nyere ndị ahịa anyị ihe akaebe na oge na mkpa dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma. N'agbanyeghị ókè i tozuru ndị na-ege gị ntị, nke bụ eziokwu bụ na otu ozi dị ka itinye ozi
N’ọtụtụ post, ekwuru m maka atụmatụ “nweta, jigide ma too” maka ụlọ ọrụ iji tozuo azụmaahịa ha, mana otu akụkụ echeghị m na m dere banyere ya bụ ịgbagha ndị ahịa. Ebe ọ bụ na m nọ na ụlọ ọrụ ngwanrọ, ahụtụbeghị m ka ndị ahịa na-alọta yabụ na anyị etinyeghị usoro iji gbalịa inweta ndị ahịa. Nke a apụtaghị na ekwesighi ime ya. M na WebTrends itinye aka ogbako na CEO Alex Yoder tụlere
Zuo ike n'udo, Nataline. Ọ bụrụ na ịnatatabeghị uru, kesaa na mkpuchi mkpuchi, ma ọ bụ nụ banyere onye nwere ya - ị nwere ihu ọma! Thelọ ọrụ ịnshọransị bụ otu n'ime uru kachasị na United States. Mgbakọ na mwepụ dị mfe, ka ndị mmadụ na-ahapụ ka ha nwụọ - ọ ka mma uru. Anyị enwere ike ịgbanwe nke a site na ịntanetị na blọgụ? Anyị enwere ike iji igwe okwu Cigna dọọ ndị ọrụ ọchụchọ ụzọ